Isitudiyo seGadi yeentyatyambo kwiVintage House Podliparska - I-Airbnb
Isitudiyo seGadi yeentyatyambo kwiVintage House Podliparska
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguLjuba
Le ndlu yesitudiyo iyinxalenye yendlu yethu eneminyaka eli-150 ubudala.
Indlu ngokwayo izele yimbali, kodwa izizukulwana ezihlala ngaphakathi zenza eyona migudu ilungileyo yokuyizalisa ngakumbi ngothando noxolo.
Le ndlu intle igcwele ukufudumala kunye nesimilo. Igadi ivulekile, iluhlaza kwaye iyonwaba, ilungile njengendawo yokuqala yeendlela zokuhamba ezikufutshane kwaye njengendawo yokuphumla emva kokuhamba.
I-Aldo istudiyo sincinci, sivulekele igadi enkulu. Ikhitshi nayo incinci kodwa isebenziseka ngokugqibeleleyo. I-plus enkulu kukuba kunokwenzeka ukufudumeza ngesithando somlilo kunye nomthwalo wokukhanya. Isitudiyo sinebhedi yesofa yomntu wesithathu ukuba kuyimfuneko.
Umyolelo weFara yindawo ezolileyo kakhulu, ejikelezwe ngamahlathi kunye neentaba. Ifumaneka kumlambo iKolpa canyon. Umlambo ukude nemizuzu emi-2 ukusuka kwindlu kwaye yenye yezona milambo zintle yiSlovenia.
Umbuki zindwendwe ngu- Ljuba